2018 ခုနှစ်စတိုင်နှင့်ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင် - ဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဆံရှင်မအဘို့ရေတို, အလတ်နှင့်အရှည်လျားဆံပင်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်နေဖို့ကလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသိရန်အသုံးဝင်သည်ဗီရိုပစ္စည်းများ, ဖိနပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဒါပေမယ့်လည်းအလှတရားစက်မှုလုပ်ငန်းမှမသာကိုတိုးချဲ့။ အသီးအသီးရာသီမှာတော့အဲဒီဒေသတွေမှာသိသိသာသာခြားနားသည်။ 2018 ခုနှစ်တွင်ဒီတော့ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင်လည်းအဓိကပြောင်းလဲမှုများခံခဲ့သည်။
ဆံပင်အရောင် 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအဘို့အတင့်တယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရောင် 2018 ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုစီပင်အများဆုံးခေတ်မီဖက်ရှင်အံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရာသီ, မာစတာဆံပင်ညှပ်သမားရဲ့အနုပညာသတိမပြုမိသည်၎င်း၏မွေခံရသောသူကိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်သော client များသဘာဝအရောင်ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အနီးကပ်သူ့ရဲ့ကျောခိုင်းထားသောတန်ချိန်, နှစ်ဦးစလုံးအားပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင် 2018 တိုတိုဆံပင်
2018 ခုနှစ်တွင်တိုတောင်းသောဆံပင်သည်အစွန်းအထင်းရွေးချယ်ခြင်း, ကဆံပင်အရောင်များ၏ပြောင်းလဲမှုများကိုဦးခေါင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာယခုရာသီသူမ၏မှအပိုအသံအတိုးအကျယ်ပေးရကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။ သူမ၏အတိုဆံပင်ကောက်ကောက်၏ပိုင်ရှင်များပုံရိပ်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်နဲ့အလင်းဆံပင်မီးလောင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးဖို့ခွင့်ပြု, ခေတ်မီနည်းစနစ်များနှင့်ဆေးဆိုး brondirovanie များအတွက်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ထဲကအများစုဟာ stylist နှင့်သခင်ကိုရွေးကောက်ပြီး။
ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand သာအနည်းငယ်က၎င်း၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲထားတဲ့အတွက် 2018 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင်, အိမ်မှာဆံပင်လုယူသောဥစ္စာနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အသွင်အပြင်ဆံပင်ရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကွောငျ့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလှပြင်ဆိုင်အတွက်သီးသန့်ဖျော်ဖြေဖို့အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ရာသီ၏ Non-ရှည်လျား strands ပိုင်ရှင်များ, သငျသညျမှာသဘာဝအလင်းအညိုရောင်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်အညိုရောင်တစ်ဦး monochromatic အရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့ပြသချင်သောသူတို့အားမင်းသမီးများအတွက် တစ်ဦးချင်း , တစ်ဦးချင်းစီ strands ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ coloring ဖက်ရှင်ဝတ်စုံ 2018 ရာသီဆံပင်။ ပြောင်လက်တောက်ပသောပန်းရောင်အတွက်လူကြိုက်များတဲ့ပန်းချီကားတစ်ဦးချင်းစီဆံပင်ကောက်ကောက်, ခရမ်းရောင်, မြအစိမ်းရောင်နှင့်အခြားအရောင်များ - သင်သည်ဤ option ကို select လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်လုံးဝမဆို color ကိုမှ preference ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ အဓိကအရာ - ထိုသို့သောဆံပင်ညှပ်သင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်အရာအောကျခွအေနမြေားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးများနှင့်ပိုနှစ်သက်သူကိုနုပျိုမင်းသမီး စားဆင်ယင်၏ဂန္စတိုင် ကြောင့်လည်းတောက်ပခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင် 2018 အလတ်စားဆံပင်
ဆံပင်၏ပျမ်းမျှအလျားပုံစံနှင့်အရောင်ပေးခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများဆုံးစွယ်စုံဖြစ်ကြသည်။ ဆံပင်၏ထိုကဲ့သို့သောဦးခေါင်းနှင့်အတူ, သင်ချင်နီးပါးဘာမှလုပျနိုငျ, ဒါကြောင့်ရာသီသစ်အတွက်မဆိုအရည်အချင်းပြည့်မီမာစတာကသူ့ client ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်မတူညီကြပေမယ့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, preference ကိုအောက်ပါနည်းစနစ်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အလတ်စား pryadok များအတွက် 2018 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ပန်းချီ:
balayazh ။ ဆေးဆိုးအမြစ်များအရင်အတိုင်းဆက်လက်ရှိနေသည့်အတွက်နည်းလမ်း, ကာဖရိုဖရဲထုံးစံ၌အာရုံထဲသို့ strands တစ်ဦးအလင်းမီးလောင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးနိုင်အောင်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ပိုင်ရှင်တွေလည်းစိမ်းလန်းစိုပြေမဟုတ်ဆံပင်အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်ရာသိသိသာသာနောက်ထပ်အသံအတိုးအကျယ်, ရယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကောင်းသောဖက်ရှင်ဆံပင်ဆေးဆိုးအနုပညာ balayazh 2018 ထိုမိန်းမသည် multilayer ဖြတ်တောက်မှုကြည့် - လှေကား, အဆငျ့ဆငျ့သို့မဟုတ် textured bean ကို;
Sombra - ချောမွေ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ technique ကို gradient ကိုအရောင်။ ပလက်တီနမ်ဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဆံရှင်မလည်းမီးလောင်နှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သော,
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်အမြစ်များ။ 2018 ခုနှစ်တွင်ဆံပင်အရောင်အတွက်တချို့ကခေတ်ရေစီးကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖက်ရှင်သလိုပဲကြလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယခုရာသီအမြစ်များ, ဆန့်ကျင်ပေါ်တစ်ဦးပင်မှောင်အရောင်ခြယ်သထားတဲ့အတွက် strands သဘောသဘာဝကနေဆံပင်၏နက်နဲခေါင်းကိုပေါ့ပိုင်ရှင်များတို့တွင်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရေပန်းစားသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန် Regrown အမြစ်များကိုသဘာဝနှင့်မူရင်းကြည့်ရှု, ဒါကြောင့်အများအပြားငယ်ရွယ်မင်းသမီးမှအယူခံမည်ဖြစ်သည်။
ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင် 2018 ရှည်သောဆံပင်
ရာသီသစ်အတွက်ဆံပင်၏ဇိမ်ခံရှည်လျားသောဦးခေါင်းပိုင်ရှင်တွေတစ်ဦး monochromatic အရောင်ဆံပင်ကောက်ကောက်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။ 2018 ခုနှစ်တွင်ရှည်သောဆံပင် Coloring ဟာစိတ်ကူးယဉ်၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ကျယ်ပြန့်နယ်ပယ်ပေးသည် - အရောင်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှပေါင်းစပ်တောက်ပပျေါလှငျနဲ့ပိုပြီး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, အကူးအပြောင်း၏ရှုပ်ထွေး, ဂိမ်းတစ်ခု ray, ဒီမှာကြိုဆိုပါတယ်။
- အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်ရှည်လျားဆံပင်ကောက်ကောက်၏ပိုင်ရှင် gradient ကို technique ကိုရှေးခယျြထား Ombre သို့မဟုတ် Sombra ။ သို့မဟုတ် shatush balayazh - burnout ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးပေးသောပြောင်းလဲနေတဲ့အရောင်လူကြိုက်များနည်းလမ်းများ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 2018 ခုနှစ်ကျနော်တို့လုံခြုံစွာသူတို့ရဲ့ဆံပင်စမ်းသပ်နိုင်ပါသည် - အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်က၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုတောက်ပနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းစနစ်, အကြိုးသကျရောဒါကြောင့်အပေါ်အမှုန့်, ​​sequins ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်နှင့်အကျအဆုံးများ။
အဆင်းလှသောလိင်များ၏အများစုတို့အတွက်ဆံပင်၏အရောင်ခေါင်းကို Choose အလွန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာစိတ်ပျက်ခံရဖို့မရှိစေရေးအတွက်, ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၏မာစတာပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုဒါပေမယ့်လည်းလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းအားဖြင့်သာပဲ့ထိန်းမိန်းကလေးများအထူးအကြံပြုလိုတယ်။ 2018 ၏အစွန်းအထင်းအလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားဖြစ်တယ်, ဒါသင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတိုက်ဖျက်မည်နှင့်၎င်း၏အသစ်အဆန်းနှိပ်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ရွှေရောင် 2018 Staining
shag ၏တောက်ပရိပ်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်အမြဲရှိပါတယ်။ သဘာဝဆံပင်ရွှေရောင်အများအားဖြင့်, သူ့ဆံပင်ကောက်ကောက်၏အရောင်အပေါ်အရှုံးမပေးချင်ကြပါဘူးရံဖန်ရံခါကသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်လန်းဆန်းနှင့်အခြား strands တန်ချိန်၏ကိုင်ဆောင်သူမကြာခဏလှပဆွဲဆောင်မှုအရောင်ကိုရှာဖွေလိုသောမိမိခေါင်းကို repainted ။ အလွန်ကွဲပြားခြားနားဆံပင်ရွှေရောင်အဘို့ 2018 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင်။ : အရှိဆုံးဆည်းကပ်ခြင်းနှင့်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုများထဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဖန်ဆင်းရပါမည်
သဲဆံပင်ရွှေရောင်။ လုံးဝအပေါငျးတို့သမိန်းကလေးငယ်များကိုက်ညီသောအရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီး undemanding အရိပ်။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါအမျိုးသမီးအချို့ကြောင့်ပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွမ်းကျင်သူများထက်ပိုတစ်ဆယ်မဖြစ်လတံ့သောသဲပေါ့ပါးသို့မဟုတ်မှောင် strands, မှေးမှိန်ဖို့အကြံပြု;
caramel ဆံပင်ရွှေရောင်။ နှစ်ပေါင်းများစွာက၎င်း၏ပိုင်ရှင်နှင့်အတူသက်သာရာနိုငျသော Play နှင့် flirtatious သေံ;
ပလက်တီနမ်။ တစ်ပလက်တီနမ်ဆံပင်ရွှေရောင်အတွက်ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင် 2018 က၎င်း၏ဆီလျော်မှုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်။ ဒါဟာရာသီ stylist ဒီအရောင်နှင့်လုလင်မင်းသမီးနှင့်နှစ်ပေါင်း 40 ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြံပြု;
ညစ်ပတ်ပေရေဆံပင်ရွှေရောင်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်, ဒီမူရင်းအရိပ်ထဲမှာ 2018 ရာသီအတွက်ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင်အထူးသဖြင့် Monitor မဟုတ်သောအရာရဲ့နောက်ကွယ်မှာ, scruffy ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုသာလူတစ်ဦးမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦး cocky ငယ်ရွယ်မင်းသမီး fit ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် Self-စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အလွန်အကျွံအချိန်ဖြုန်းလိုကြဘူး,
လင်းကျောက်ထလေ၏။ သို့သော်သူကသာငယ်ရွယ်မင်းသမီးရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်အရာ, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာက hue,
များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မီးခိုးရောင်။ ယနေ့ဤဗားရှင်းအသက်အတွက်မိန်းမတကာတို့ထက်မသာကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းလူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်လိုသူကိုနုပျိုမင်းသမီး။
မှောင်မိုက်အရောင်နေရန်ဆန္ဒရှိ, သို့မဟုတ်ရာသီသစ်အတွက်ဝယ်သူများသည်ကြောင့်ထူးခြားသောလူကြိုက်များပျော်မွေ့တံ့သောအအေးအရိပ်, ကြိုက်တတ်တဲ့ရန်အကြံပြုသည်။ အောက်ပါ options များလျှော့ချအနက်ရောင်ဆံရှင်မအဘို့အဓိကအားဖြင့် 2018 ခုနှစ် coloring ဆံပင်:
အစိမ်းရောင်ရှိသောအနက်ရောင်။ ဤသည်သေံက၎င်း၏ဆီလျော်မှုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှတံ့သောတည်မြဲဂန္ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းရာသီသစ်အတွက်ကြောင့်အခြားမည်သည့်အရိပ်နှင့်အတူအတူယဥ်တွဲမရပါ - အပြာနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာခွင့်ပြုခဲ့ဘဲ,
burgundy - နှင့်လွတ်လပ်သောဖြစ်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ထဲမှာရွှေ့ရသောနက်ရှိုင်းသောအရိပ်, မထိုးဖောက်;
စပျစ်ရည်နှင့်ချယ်ရီ - လှပသောပြင်းထန်သောအရိပ်, ပုံမှန်အတိုင်းအမျိုးသမီးတွေခရမ်းချဉ်သီးကိုအစားထိုး။
အညိုရောင်ဆံပင် 2018 Staining
ပိုင်ရှင်များဆံပင်၏ဆံပင်ရွှေရောင်ဦးခေါင်း, သငျသညျနီးပါးမည်သည့်အရောင်၌သင်တို့၏ဆံပင်ဆိုးဆေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ လူကြိုက်များသည့်သဘာဝနှင့်အပြာဆံပင်ရွှေရောင်, caramel တစ်ဦးထိတွေ့နှင့်အတူရွှေ-အညိုရောင်, အလင်းအညိုရောင်။ ထို့အပြင်မင်းသမီး 2018 ခုနှစ်တွင်အောက်ပါဆံပင်အရောင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဘို့ကိုကြည့်နိုင်သည်
နို့ချောကလက်၏အရောင် - အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးများအတွက်ဣတ္နှင့်လက်တွေ့ option ကို;
ကော်ဖီ - အလင်း-အညိုရောင်ဆံပင်အလှအပအတှကျစုံလင်သော unfading ဂန္။
2018 ခုနှစ်တွင်အနီရောင်ဆံပင် Staining
သူတို့အဖြစ်အနီရောင်ဆံပင်အလှသစ်ကိုရာသီအတွက်လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆံပင်သူတို့ရဲ့အရောင်ဦးခေါင်း, အမှုအရာထားခဲ့နိုင်သည်။ ထိုအတောအတွင်းတွင်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီးကဲ့သို့သောစတိုင်ဆေးဆိုး 2018:
မီးအနီ - ဤသားရဲတကောင်အဘို့အတောက်ပနှင့်လိုက်စားသေံ;
ဆိမျ့ - ပျော့နှင့်ရင်ခုန်စရာစိတ်နုပျိုမင်းသမီးတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ဗားရှင်း;
ကိုရွှေ - ထိုလူငယ်နှင့်ရဲပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့သေံ, Play နှင့် Impulse ၏ပုံရိပ်ကိုပေးခြင်း။
ဆံပင်အရောင် 2018 ခုနှစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
2018 ခုနှစ်ပန်းချီကားအတွက်အဓိကခေတ်ရေစီးကြောင်းကျယ်ပြန့်အနည်းငယ်ရာသီလွန်ခဲ့အသုံးပြုကြသည်။ သဘာဝတဦးတည်း, တောက်ပနူးညံ့သောချောမွေ့အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ INSERT ၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ထို့ထက် ပို. မီးရှို့နှစ်ပေါင်းများစွာလျော့မတတ်နိုင်သမျှနီးစပ်သည့်သဘာဝအရောင်ကဲ့သို့သောခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဆက်စပ်မှု။ ဒီအတောအတွင်းလာမယ့်ရာသီကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲသွားချင်တဲ့သူတွေကိုမိန်းကလေးငယ်များကိုနားထောင်သင့်တယ်သောအသစ်သောခေတ်ရေစီးကြောင်း, အပ်ပေးတော်မူ၏။
ဆံပင်အရောင် technique ကို 2018
ဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးသားအပေါင်းတို့, အမျိုးသမီးများ, မခွဲခြားဘဲအသက်, သဘာဝ-ရောင်စုံဆံပင်ကောက်ကောက်, ရှည်လျား strands နှင့်ပိုပြီးအဘို့လုံးဝသင့်လျော်သော - အားလုံး 2018 ရာသီ၏အခြေခံ technique ကို brondirovanie ဖြစ်ပါတယ်။ brondirovanie ၏အကူအညီဖြင့်တိုင်းအခြေအနေမှာလုံးဝသင့်လျော်သောပါလိမ့်မည်သည့် burnout ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရိပ်ရရှိရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, gradient ကိုသက်ဆိုင်ရာအနုပညာ, ဥပမာ, ဒါမှမဟုတ် Sombra Ombre မူရင်း shatush သို့မဟုတ် balayazh နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာ။
2018 ခုနှစ်တွင် coloring ရောင်စုံဆံပင်လျော့နည်းရေပန်းစားသည်, သို့သော်, နုပျိုမင်းသမီး၏စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုကိုလည်းယင်း၏အထင်ကြီးလေးစားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်ရာသီအတွက်ကထွန်းတောက်အရိပ်ထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးမှတ်မိလွယ်တဲ့နှင့်ကျောခိုင်းထားသောတန်ချိန်ရှိပါတယ်ရသောအရောင်များ၏နည်းလမ်းကို၏သငျ့လျြောသောအသုံးပြုမှုအားလုံးဆံပင်ဆေးထိုးခြင်းမှအကြံပြုသည်မဟုတ်။
ရာသီသစ်မှာဆတ္၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်အသံအတိုးအကျယ်ကိုငါပေးမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဖြတ်တောက်နှင့်အစွန်းအထင်း 2018 layering နှင့်လည်းမီးလောင်များ၏သက်ရောက်မှုများပေါင်းစပ်။ အလွန်မကြာခဏ stylist ပေါင်းစပ်ကြိုက်တတ်တဲ့ အဆငျ့ဆငျ့ခေါင်းဖီး နှင့်တွဲဖက်အတွင်းမည်သည့်အခါသမယတစ်ခုထွန်းတောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ဆံပင်ဖန်တီးပေးသောအရောင် gradient ကို technique ကို။
Office ကိုစားဆင်ယင် 2013
ဖက်ရှင်အိတ် - နွေဦး-နွေရာသီ 2016
အဖြူရောင်လက်သည်းဒီဇိုင်း - ဖက်ရှင်အဖြူနောက်ပြီး 28 မျိုးကွဲ
ဖက်ရှင်လက်သည်း - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
နွယ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဒင်ဗာမြို့မှ cardigan - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း
တစ်ဦးဂန္စာရွက် - မုယောစပါးနှင့်အတူ Pickled
Patton Oswalt နှင့် Meredith Selendzher 18 လလူရွှင်တော်၏ပထမဇနီး၏သေသောနောက်လက်ထပ်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
Placental ရုတ်တရက် - လက္ခဏာများ
နှာခေါင်းထဲမှာ polyps - ဘယ်လိုဆက်ဆံဖို့နဲ့အခါ, delete သလော
Vivienne Westwood လိင်တူချစ်သူ? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကိတ်မော့စ်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ခဲ့သည် ...